दाङमा दीपकको दबदबा, ६ मध्ये ५ मा संस्थापनइतर विजयी – Nepal Press
दाङमा दीपकको दबदबा, ६ मध्ये ५ मा संस्थापनइतर विजयी
२०७८ मंसिर ५ गते ११:३६
दाङ । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनअन्तर्गत दाङमा संस्थापनइतर पक्षले पकड कायम गरेको छ । कांग्रेस नेता स्व. खुमबहादुर खड्काको क्षेत्रमा पनि संस्थापनइतर पक्षले जितेको छ ।
केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरीको संयोजनमा दाङका ६ मध्ये ५ प्रदेशसभा क्षेत्रीय समितिमा संस्थापनइतर पक्षले जित हासिल गरेको हो । पूर्वमन्त्री एवं केन्द्रीय सदस्य गिरीको क्षेत्र नम्बर ३ (क) को सभापतिमा देवेन्द्रप्रसाद रिजाल र ३ (ख) को सभापतिमा खिमबहादुर वली विजयी भएका छन् । क्षेत्र नम्बर १ (क) को सभापतिमा श्रीपद चौधरी र १ (ख) को सभापतिमा दिनेश गिरी निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै क्षेत्र नम्बर २ (ख) मा अभियान बस्नेत सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् ।
उनीहरू सबै केन्द्रीय सदस्य गिरीनिकट हुन् । केन्द्रीय राजनीतिमा गिरी बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री डा. शशांक कोइरालानिकट मानिन्छन् । प्रदेश प्रतिनिधिमा पनि संस्थापनइतरकै बहुमत रहेको बताइन्छ ।
संस्थापन पक्षले क्षेत्र नम्बर २ (क) मा मात्रै जित हात पारेको छ । सो प्रदेशसभा क्षेत्रमा प्रकाश श्रेष्ठ सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । तीन प्रतिनिधिसभा क्षेत्र रहेको दाङमा अब मंसिर ६ गते क्षेत्रीय अधिवेशन हुनेछ ।
प्रकाशित: २०७८ मंसिर ५ गते ११:३६